Muxuu isu casilay taliyaha hay'adda sirdoonka NISA? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu isu casilay taliyaha hay’adda sirdoonka NISA?
Muxuu isu casilay taliyaha hay’adda sirdoonka NISA?
Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimaha hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, Xuseen Cusmaan Xuseen (Uurkuus), ayaa si rasmi ah isaga casilay xilka, sida ay goor-dhow shaacisay hay’adda.
Qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka ayey NISA ku tiri “Agaasimaha Guud ee Hey’adda Sirdoonka & Nabadsugida Qaranka Soomaaliyeed (NISA), Xuseen Cusmaan Xuseen ayaa maanta oo taariikhdu tahay 13/10/2018, sababo asaga u gaar ah owgeed warqadiisa iscasilaada u gudbiyay Madaxwaynaha JFS.”
Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegeysa in taliye Xuseen Cusmaan Xuseen la filayo inuu isku sharxo xilka madaxweynaha maamullka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, oo doorashadiisa ay dhici doonto bisha soo socota.